အကိတ်မလေး မေပန်းချီကတော့ ပိုက်ဆံလဲမရှိ အပျင်းလည်းကြီးတဲ့ အမျိုးသားတွေကို ဒဲ့ပြောချလိုက်ပြီ (ရုပ်သံ) – Shwe Ba
Homepage / Cele News / အကိတ်မလေး မေပန်းချီကတော့ ပိုက်ဆံလဲမရှိ အပျင်းလည်းကြီးတဲ့ အမျိုးသားတွေကို ဒဲ့ပြောချလိုက်ပြီ (ရုပ်သံ)
အကိတ်မလေး မေပန်းချီကတော့ ပိုက်ဆံလဲမရှိ အပျင်းလည်းကြီးတဲ့ အမျိုးသားတွေကို ဒဲ့ပြောချလိုက်ပြီ (ရုပ်သံ)
မေပန်းချီ က တော့ အမိုက် စား ခန္ဓာ ကိုယ်နဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့မျက်နှာ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတာ ကြောင့် အမျိုးသား ထုကြီးရဲ့ ဝန်းရံအား ပေးခြင်း ကို ရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ပါ ။ ကိုယ်ပိုင် အရည်အချင်း အပြည့်နဲ့ အနုပညာ လောကမှာ နေရာ တစ်ခု ရလာသူ ဖြစ်ပါ တယ် … .
သရုပ်ဆောင် ပိုင်းမှာ ဆိုရင် လည်း အပြစ် ပြောစရာ မရှိအောင် ဆေးစက် ကျရာ အရုပ်ထင် အောင် အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင် ပုံဖော်နိုင်သူ တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်ပါတယ် နော် ။ အရမ်း မိုက်တဲ့ ကောက် ကြောင်းအလှ တွေကို ပေါ်လွင်စေ တဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ ဖက်ရှင် မျိုးလေးတွေ ကို များသောအား ဖြင့် ဝတ်တတ် တာကြောင့် ပုရိသ တွေ ရဲ့ အာရုံ စိုက် အားပေးမှု တွေကို ရရှိထားခဲ့ ပါတယ်နော် ။
ယခု အခါမှာ တော့ မေပန်းချီ ရဲ့ အင်တာဗျူး လေး ကို တင်ပေး လာတာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ MC က အင်တာဗျူး တဲ့ ဗီဒီယိုလေး မှာတော့ မေပန်းချီ က “ ပိုက်ဆံ မရှိလည်း မိန်းမတွေ က ချစ်တာ ပဲ ပိုက်ဆံ လည်းမရှိ စောက်ပျင်း ဖြစ်နေရင်တော့ ချစ်မှာ မဟုတ်ဘူး ဆို ပြီး ဖြေထား တာပဲဖြစ်ပါ တယ် ။ မေပန်းချီ ရဲ့ ဖြေကြား ထားတဲ့ အင်တာဗျုး ဗွီဒီယို လေးကို ပရိသတ် ကြီး အတွက် ပြန်လည် မျှဝေပေး လိုက် ပါတယ်နော် … .
ေမပန္းခ်ီ က ေတာ့ အမိုက္ စား ခႏၶာ ကိုယ္နဲ႔ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိတဲ့မ်က္ႏွာ ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတာ ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား ထုႀကီးရဲ့ ဝန္းရံအား ေပးျခင္း ကို ရရွိထားတဲ့ အႏုပညာရွင္ တစ္ေယာက္ပါ ။ ကိုယ္ပိုင္ အရည္အခ်င္း အျပည့္နဲ႔ အႏုပညာ ေလာကမွာ ေနရာ တစ္ခု ရလာသူ ျဖစ္ပါ တယ္ … .
သ႐ုပ္ေဆာင္ ပိုင္းမွာ ဆိုရင္ လည္း အျပစ္ ေျပာစရာ မရွိေအာင္ ေဆးစက္ က်ရာ အ႐ုပ္ထင္ ေအာင္ အေကာင္းဆုံး သ႐ုပ္ေဆာင္ ပုံေဖာ္နိုင္သူ တစ္ေယာက္ လည္း ျဖစ္ပါတယ္ ေနာ္ ။ အရမ္း မိုက္တဲ့ ေကာက္ ေၾကာင္းအလွ ေတြကို ေပၚလြင္ေစ တဲ့ ဆက္ဆီ က်က် ဖက္ရွင္ မ်ိဳးေလးေတြ ကို မ်ားေသာအား ျဖင့္ ဝတ္တတ္ တာေၾကာင့္ ပုရိသ ေတြ ရဲ့ အာ႐ုံ စိုက္ အားေပးမႈ ေတြကို ရရွိထားခဲ့ ပါတယ္ေနာ္ ။
ယခု အခါမွာ ေတာ့ ေမပန္းခ်ီ ရဲ့ အင္တာဗ်ဴး ေလး ကို တင္ေပး လာတာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ MC က အင္တာဗ်ဴး တဲ့ ဗီဒီယိုေလး မွာေတာ့ ေမပန္းခ်ီ က “ ပိုက္ဆံ မရွိလည္း မိန္းမေတြ က ခ်စ္တာ ပဲ ပိုက္ဆံ လည္းမရွိ ေစာက္ပ်င္း ျဖစ္ေနရင္ေတာ့ ခ်စ္မွာ မဟုတ္ဘူး ဆို ၿပီး ေျဖထား တာပဲျဖစ္ပါ တယ္ ။ ေမပန္းခ်ီ ရဲ့ ေျဖၾကား ထားတဲ့ အင္တာဗ်ဳး ဗြီဒီယို ေလးကို ပရိသတ္ ႀကီး အတြက္ ျပန္လည္ မၽွေဝေပး လိုက္ ပါတယ္ေနာ္ … .
Previous post အမျိုးသားထုကြီးရဲ့ နှလုံးသားကို အမိုက်စားပုံစံလေးတွေနဲ့ စွဲဆောင်လိုက်ပြန်တဲ့ ရွှေအိမ်စည်ရဲ့ စပါယ်ရှယ်ပုံရိပ်လေးတွေ
Next post ရေကူးကန်ထဲမှာ ရေကူးဝတ်စုံလေးနဲ့ အရမ်း ကို မိမိုက်လွန်းနေတဲ့ မရမ်ဆိုင်းနူးရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး